भगवानले छान्नुभयो, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
जो कोही जो कहिले खेलमा भाग लिएको टोलीमा निर्वाचित गरिएको छ वा अन्य उम्मेदवारहरूलाई असर गर्ने केहि पनि छानिएको छ को भावना थाहा छ। यसले तपाईंलाई इष्ट र अनुमोदित भएको अनुभूति दिन्छ। अर्कोतर्फ, हामी मध्ये धेरैले पनि निर्वाचित नहुनुको विपरीत थाहा पाउँदछौं, तपाईं बेवास्ता गर्नुहुन्छ र अस्वीकृत महसुस गर्नुहुन्छ।
परमेश्वर, जसले हामीलाई हामी को बनाउनुभएको छ र यी भावनाहरू बुझ्नुहुन्छ, जोड दिनुहुन्छ कि उहाँ इस्राएलको रूपमा आफ्नो जनको रूपमा छनौट गर्नुभयो तर होसियारीसाथ विचार गरीन्थ्यो र दुर्घटनामा त्यो हुदैन। शमूएलले तिनीहरूलाई भने, “किनभने तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका विशेष मानिसहरू हौ। र पृथ्वीका सबै मानिसहरूका बीचमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई एउटा विशेष मानिस रोज्नु भयो।” (व्यवस्था १:: २) पुरानो नियमका अन्य पदहरूले पनि परमेश्वरले छनौट गर्नुभयो भनेर देखाउँदछ: एउटा शहर, पुजारीहरू, न्यायाधीशहरू र राजाहरू।
कलस्सी :3,12:१२ र १ थिस्स। १, explain वर्णन गर्दछौं कि हामी पनि इजरायल जस्ता चुनिएका छौं: «हामीलाई थाहा छ, भगवानहरू द्वारा प्रेम गर्ने भाइहरू, तपाईको चुनावको बारेमा (उनका मानिसहरूलाई) "यसको मतलब यो हो कि हामी मध्ये कुनै पनि दुर्घटना थिएन। हामी सबै यहाँ परमेश्वरको योजनाबाट आएका छौं। उहाँ जे गर्नुहुन्छ सबै उद्देश्य, प्रेम र बुद्धिले सम्पन्न भयो।
ख्रीष्टमा हाम्रो चिनारीको बारेमा मेरो अन्तिम लेखमा, मैले क्रसको फेदमा "छनौट" भन्ने शब्द राखें। यो त्यस्तो चीज हो जुन म विश्वास गर्दछु कि हामी को हौं ख्रीष्टमा को हौं र विवेकको लागि पनि महत्वपूर्ण छ। यदि हामी वरिपरि हिंड्छौं र विश्वास गर्छौं कि हामी यहाँ ईश्वरको कुनै चिन्ता वा घनको रोलिंगद्वारा आएका छौं भने हाम्रो विश्वास हुन्छ कमजोर हुनुहोस् र परिपक्व मसीहीहरूको रूपमा हाम्रो विकासले दु: ख पाउँछ।
हामी सबैले थाहा पाउनु पर्छ र विश्वास गर्नु पर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो र हामीलाई नामले बोलाउनु भयो। उसले तिमी र मलाई काँधमा टेक्दै भन्यो: "म तिमीलाई रोज्छु, मेरो पछि लाग!" हामी विश्वस्त हुन सक्छौं कि हामी जान्दछौं कि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो, हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, र हामी प्रत्येकको लागि योजना छ।
न्यानो र अस्पष्ट महसुस बाहेक हामीले यस सूचनालाई के गर्नुपर्दछ? यो हाम्रो इसाई जीवनको आधार हो। हामी चाहन्छौं कि हामी उहाँकै हौं, हामी माया गर्छौं, हामी चाहन्छौं र बुबाले हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वर जान्न चाहनुहुन्छ। तर यो त्यस्तो होइन किनकि हामीले केहि पनि गरेका थियौं। जसरी उनले मोशा 7,7: the को पाँचौं पुस्तकमा इस्राएलीहरूलाई भने: “किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई चाहानु भएको सबै जातिहरू भन्दा तिमीहरू धेरै संख्यामा छौ र तिमीहरूलाई रोजेका छौ; तपाई सबै मानिसहरु मध्ये सबैभन्दा कम हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हामी दाऊदसँग यसो भन्न सक्छौं: «मेरो आत्मा, तिमी किन शोकित छौ? तिमी ममा यति विचलित छौ? भगवानको लागि पर्खनुहोस्; किनकि म उसलाई अझै धन्यवाद दिन्छु कि उहाँ मेरो अनुहारको मुक्ति र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। (भजन .42,5२..XNUMX)!
किनकि हामी निर्वाचित छौं, हामी उसको लागि आशा गर्न सक्छौं, उहाँलाई प्रशंसा गर्न र उहाँमा भरोसा राख्न सक्छौं। त्यसोभए हामी अरूमा फर्केर परमेश्वरमा पाएको आनन्द विकिरित गर्न सक्छौं।